Mba hankalazana ny Fetim-pirenena sy ny Fetin'ny Fararano-fararano dia misy fivoriana ara-panatanjahantena kely atao ao amin'ny Shuangyang Medical. Ny atleta dia misolo tena ny departemanta samihafa: Sampan-draharahan'ny fitantanan-draharaha, sampan-draharaha ara-bola, sampan-draharaha mividy, sampan-draharaha teknolojia, Pro ...
Fampirantiana COA 2019
Ny Konferansa Akademia Orthopaedika faha-21 sy ny Fihaonamben'ny Akademia COA faha-14 an'ny Fikambanam-pitsaboana sinoa dia kasaina hatao ao amin'ny National Convention and Exhibition Center (Shanghai) amin'ny 14 ka hatramin'ny 17 Novambra 2019. Ity no fotoana voalohany nanaovan'ny COA (Orthope Sinoa .. .
Ny fifaninanana fahaiza-manao dia hatao amin'ny 29 septambra any Shuangyang Medical noho ny faha-70 taonan'ny niorenan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina. Raiso ho toy ny asa aman-draharaha ny asa ary hajao ny asanay manokana na inona na inona asa famokarana izay raisinay, ary tohizo hatrany ny f ...
Fampirantiana COA 2018
Ny fihaonambem-pianarana akademika faha-20 sy ny kaonferansa akademika COA faha-13 an'ny Fikambanan'ny mpitsabo sinoa dia notontosaina tany Xiamen ny 21 hatramin'ny 24 novambra 2018. Manantena ny fihaonana aminao ao amin'ny trano fitsaboana Shuangyang. ...
Fampirantiana COA 2017
Ny fihaonambem-pianarana akademika faha-19 an'ny Fikambanam-pitsaboana sinoa sy ny Fikambanan'ny orthopedika sinoa faha-12 (COA) dia notontosaina tany Zhuhai, faritanin'i Guangdong tamin'ny 15 ka hatramin'ny 18 novambra 2017. Manantena ny fihaonana aminao ao amin'ny trano fitsaboana Shuangyang. ...
Ahoana no fanasitranana taolana tapaka?
Manasitrana ny taolana amin'ny fanaovana cartilage hametahana vonjimaika ny lavaka noforonin'ny fiatoana. Nosoloana taolana vaovao io avy eo. Fianjerana, arahin'ny vaky - olona maro no tsy mahalala an'io. Marary ny taolana tapaka, fa ny ankamaroany kosa manasitrana ...
Fibula Fibula: soritr'aretina, fitsaboana ary fanarenana
Ny fibula sy tibia dia taolana roa lava amin'ny tongotra ambany. Ny fibula, na taolana zanak'omby, dia taolana kely miorina eo ivelan'ny tongotra. Ny tibia, na shinbone, dia ilay taolana mitondra lanja ary ao anatin'ny feny ambany. Ny fibula sy ny tibia dia mikambana ao ...
Fanamarihana fampirantiana COA 2017
Ny Kongresy Iraisam-pirenena faha-12 an'ny Fikambanana Orthopedika Sinoa (COA) dia hatao ny 15 ka hatramin'ny 18 Novambra. Manantena ny hihaona aminao.
Fivoriana fanao isan-taona 2016
Shuangyang Medical dia nanao fiaraha-misakafo fivoriana isan-taona ny 18 Janoary 2017 ho fisaorana ny mpiasa rehetra tamin'ny asa mafy nataony tamin'ny taona 2016, ary mirary soa ireo mpiara-miasa salama, fahasambarana ao amin'ny fianakaviana ary asa mba handeha tsara amin'ny tsirairay amin'ny taona vaovao! ...
Fampirantiana COA 2016
Ny fihaonambem-pianarana akademika andiany faha-18 sy ny kaonferansa akademika iraisam-pirenena COA faha-11 tamin'ny 2016 dia notontosaina tao amin'ny National Conference Center Beijing nanomboka ny 17 Novambra 2016 hatramin'ny 20 Novambra 2016. Manantena ny fihaonana aminao ao amin'ny trano fitsaboana Shuangyang. ...
Fampirantiana COA 2014
Ny fihaonambe akademika Shinoa Orthopedika faha-16 sy ny Fikambanan'ny orthopedika sinoa faha-9 (COA) dia hatao ao amin'ny National Conference Center Beijing ny 20 ka hatramin'ny 23 Novambra 2014. Manantena ny fihaonana aminao ao amin'ny trano fitsaboana Shuangyang. ...
Famantarana mari-pahaizana momba ny patanty
Ny rafitra titanium mesh anatomika sy ny rafitra fifamatorana titanium dia natomboka, ary nahazo mari-pahaizana momba ny patanty famolavolana ho an'ny vokatra 25 izahay.